steempress – Page 8 – @mmunited
Steemit အကောင့်တစ်ခု လုပ်ဖို့ ၇ရက်ကနေ ၁၄ ရက်ကြား စောင့်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လုပ်တာတော့ ၅ရက်ပဲ ကြာပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ steemit မှာ အကောင့်လုပ်လဲ ဆိုတော့ သူပေးထားတဲ့ ၁၅ SP ကိုလိုချင်လို့ပါ။ တစ်ကယ်လို့ အဲ့ဒိ စောင့်ရတဲ့ အချိန်ကို မစောင့်ချင်ရင် ကိုယ်ဘာသာကိုယ်လုပ်လို့ရပါတယ်။3Steem ပဲကုန်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင် လုပ်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မလုပ်ချင်ရင်တော့ ဝန်ဆောင်ခ 1 steem ယူပြီးဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေကွာခြားသွားသလဲ။ Steemit မှာ လုပ်ရင် ၁၅ SP အလကားရပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုရယ်၊ email ရယ်လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၁၅ SP မရတော့ပါဘူး။ ပေးလိုက်ရတဲ့ ၃ Steem က ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို …
Ideas on Steem blockchain:Upvote me service in Steemchat
ဒီစိတ်ကူးကိုတော့ Steemchat Discord channel မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ discord ကိုတော့ အောက်ကလင့်ခ်ကနေ join နိုင်ပါတယ်။ https://discord.gg/wdsHVPP သူ့မှာလဲ စည်းမျဉ်း အနည်းငယ်တော့ရှိပါတယ်။ ပထမ အချက်က upvote-me ဆိုတဲ့ channel ကို ဝင်ပြီးတော့ ပိုစ့်တင်ခွင့်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ 0.1 steem ပေးရပါတယ်။ 0.1 steem ကို broadcast ကိုလွှဲပြီးတော့ memo မှာ for upvote me review account လို့ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စည်းမျဉ်းတစ်ခုကတော့ 1-upvote me ဆိုတာကို အရင်ရေး space ခြားပြီးတော့ ကိုယ့်လင့်ခ်ကို ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ၂ နာရီကနေ ၈ နာရီအတွင်း …
Ideas on steem blockchain: Steembasicincome
Steem Basic Income isasocial experiment to bringabasic income to as many Steemians as possible. Members join by sponsoring others into the program. Steem Basic Income is delivered through providing regular upvotes to member content. Steembasicincome ဆိုတာကတော့ steemians တွေအတွက် basic income ရဖို့အတွက် စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကို Sponsor ပေးခြင်းဖြင်း ဒီအစီအစဉ်ထဲကို ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ Steembasicincome ကတော့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို upvote …
Introduction to One up, One Down Steemit Networking Challenge
Ref Link : https://steemit.com/steem/@paulag/one-up-one-down-steemit-networking-challenge-1 ကျွန်တော် ဒီ accout လုပ်တာ နှစ်ဆယ့်သုံးရက်ရှိပြီဖြစ်သလို RP ကလဲ ၅၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီအကောင့်ကို သူများတွေကို ကူညီပေးဖို့လုပ်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရလဒ်တွေက မကောင်းလှဘူး။ upvote တွေရယ် comment တွေရယ် ပိုပြီးတော့လိုလာပါတယ်။ ဒါမှလဲ ရေးရတာ ပိုကောင်းလာသလို အခြားသူတွေကိုလဲ ပိုပြီး ကူညီနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမ MSU ကို join မလားလို့စဉ်းစားပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ စည်းမျည်းတွေနဲ့က သိပ်အဆင်မပြေလှဘူးထင်တာပဲ။ အဲ့ဒိတော့ နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြိုစားကြည့်ရမှာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ @paulag ရဲ့ One up, One Down Steemit Networking Challenge ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပိုစ့်ကတော့ @paulag ရဲ့ စိတ်ကူးကို ရေးထားတာဖြစ်သလို …